सरकारले घटायो बजेटको आकार, किन झारियो १३ खर्ब ४४ अर्बमा खर्च ? (भिडियो रिपोर्टसहित) – Himalaya Television
सरकारले घटायो बजेटको आकार, किन झारियो १३ खर्ब ४४ अर्बमा खर्च ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
२०७७ माघ २७ गते १६:५३
२७ माघ २०७७ काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आम्दानी र खर्चमा संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आम्दानी र खर्चमा संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
आकार बजेट सरकार